Wiricheya Panyama Therapy uye Kusimba
Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri na1800wiricheya; tinopa simudza zvigaro, mibhedha yemuchipatara, & kubata murwere kwakachengeteka.
hwiricheya Physical Therapy uye Fitness chirango chinotarisa pakubatsira vanhu kukudziridza simba nekuwanazve mashandiro emitezo nemhasuru dzemiviri yavo. Chido chemurwere chekurapwa kwemuviri chinoshanduka kubva kuzvinhu zvakaita se kuipa, chirwere chinopedza simba, kana kuti kukwegura. Varapi vemuviri vanoshanda nevarwere munzvimbo zhinji senzira yekuvandudza. Iyo inozivikanwawo se physiotherapy, kurapwa kwepanyama kunoshandiswa munzvimbo dzinoverengeka, kusanganisira zvipatara, dzimba dzekuchengetedza, uye mahofisi akazvimirira. Chinangwa chekurapwa kwemuviri kusimbisa kana kuchengetedza basa kune vanhu vakarasa hunyanzvi, uye nekudaro nekuvandudza kwavo unhu yehupenyu.
University of Washington: Nguva yenguva yenhoroondo yekurapa kwepanyama.
Iyo Nhau Yemashoko YeDenver Vana Chipatara: Chinyorwa chakadzama nezve kukura kwehutano hwepanyama hwevana.
Education uye Training
United States Dhipatimendi reVashandi: Iwo maverengera uye edzidzo zvinodiwa kune varapi vemuviri.
Basa Renzvimbo: Ruzivo uye basa rezvekurapa.
Dare reVanoshamisa Vana: Ruzivo nezve dzidziso uye basa repanyama murapi.
Florida Hutano Dzidzo Center: Tsananguro pfupi yemamiriro uye basa remurapi wepanyama.
Iyo Federation yeHurumende Mabhodhi ePanyama TherapyIyo yenyika saiti inoratidzira ruzivo rwekupa marezenisi sechiremba wepanyama.
Fitness Forum: Webhusaiti yakatsaurirwa kune ruzivo uye zviwanikwa zvevarapi vemuviri.
Intute: Chinyorwa cheInternet zviwanikwa zve physiotherapy.
Mhando dzePanyama Therapy
National Pain Nheyo: Ruzivo nezve kushandisa kurapwa kwepanyama kwekutambudzika kwekutambudzika.
Hutano Huri nani: Chinyorwa chinotsanangura mhando dzinoverengeka dzerapi.
Physiotherapy Inoshanda: Rondedzero yemhando dzakasiyana dzerapi uye kushandiswa kwavo kwakajairika.
National Center pane Zvepanyama Chiitiko uye Kuremara: Tsananguro yemushonga wepanyama wemumvura.
Foramu neMailing Lists
PhysicalTherapist.com: Saiti yenhau uye hurukuro yevarapi vemuviri.
Physioforum: Nharaunda yepamhepo yevarapi vemuviri.
Medical Sites uye Medical Journals
Zvinyorwa zveAmerican Physical Therapy Association: Iyo yepamhepo magazini yezvinyorwa zvine chekuita nekurapwa kwemuviri.
National Athletic Varairidzi Sangano: Nzvimbo yevarapi vemuviri uye avo vanoshanda mumitambo.
enderera: Magazini yepamhepo yakanangana nevarapi vemuviri.
Therapy Therapy Ongororo: Saiti ine zvinongedzo kuzvidzidzo zvenguva pfupi yadarika mumunda wehutano hwepanyama.
Iyo Kessler Nheyo: Iyo reji peji reiyo sangano rakatsaurirwa kutsvagirisa kuremara uye kurapwa kwepanyama.
Zvinyorwa zveMudzidzi Panyama Therapy Tsvagiridzo: Muunganidzwa wenyaya dzakatsvakurudzwa dzemishumo yenyaya.
PT Pakati: Nzvimbo yekushandisa inonyora nhau, mabasa, uye ruzivo rwekudzidzisa.
Yangu yePanyama Therapy Space: Chinyorwa chemabasa uye zvimwe zvinhu zvinodiwa pakurapa kwepanyama kuita.
US Kurapa Kwepanyama: Iyo webhusaiti yeakakura-chikamu opareta epanyama kurapa makiriniki nyika dzese.
Iyo World Confederation yePanyama Therapy: Saiti inopa zviwanikwa zvakawanda zvevarapi vemuviri.
Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri ne1800wheelchair's chitoro chemagetsi cheshuga. Tinopa Dhiyabhorosi shangu & masokisi, ganda kutarisirwa, uye metres & mitsetse.
Chirwere cheshuga chirwere chakakomba chinokanganisa vanhu vanopfuura mamirioni makumi maviri nematatu muUnited States. Chirwere cheshuga chirwere apo muviri usingakwanise kugadzirisa uye kugadzirisa shuga yeropa, izvo zvinogona kutungamira kumatambudziko akakomba ekurapa. Kune vanhu vazhinji vakatoonekwa kuti vane chirwere cheupenyu hwese uye vazhinji vane mamiriro ezvinhu anovaisa pamberi pekukudziridza. Tsvagiridzo iri kuitwa panzira dzekurwisa chirwere ichi nekuwana mushonga.
Chirwere cheshuga mamiriro apo muviri usingakwanise kugadzirisa uye kushandisa shuga iri muropa. Kana munhu akadya chikafu, muviri wake unovhuna zvinovaka muviri zviri muchikafu kuita glucose. Glucose inonzi zvakare "shuga yeropa" uye ine basa rekupa simba kumuviri kutora chikamu mumabasa uye kukura. Nhengo mumuviri inonzi pancreas inogadzira insulin, chinova chinhu chinotendera kuti glucose ipinde mumasero emuviri kuti ishandiswe. Nechirwere cheshuga, izvi zvinoitika mukati memuviri hazvigone kuitika. Kana ikasarapwa, chirwere cheshuga chinogona kukonzeresa kumatambudziko eziso, kunetsekana nekutenderera kweropa, nekukuvadza nhengo dzemukati. Inogona pakupedzisira kukonzera kufa kana ikasadzorwa. Chirwere cheshuga chirwere chakakomba chinoda manejimendi nerubatsiro rwechiremba.
Sangano reAmerican Diabetes Association: Zvinokosha zvechirwere cheshuga.
Pamphlet kubva kuAmerican Heart Association: Chii chinonzi Chirwere cheshuga uye Ndingachidzora Sei?
Iyo Yunivhesiti yeCalifornia Cooperative Kuwedzera: Dhiyabhorosi tsananguro uye mhando.
Yevechidiki Chirwere cheshuga Ongororo Foundation: Tsananguro yeshuga.
Mhando dzechirwere cheshuga
Kune matatu marudzi eshuga. Type 1 chirwere cheshuga mamiriro apo rwatata haruburitse insulin yakakwana kushandisa glucose iri mumuviri. Mashuga eglucose anobva awedzera muropa, zvichikonzera husimbe hwekutenderera system. Vanhu vane chirwere cheshuga cheshuga vanofanirwa kutora zvinowedzera insulin muhupenyu hwavo hwese. Type 1 chirwere cheshuga inoitika kazhinji muvana nevakuru vechidiki, asi inogona kukura mune vanhu veese mazera. Neichi chikonzero, iyo inonziwo sevana vechirwere cheshuga.
Rudzi rwechipiri rwechirwere cheshuga rudzi rwechipiri, inova ndiyo inonyanya kufarirwa. Muchiitiko ichi, rwatata rwunoita insulin, asi muviri haugone kuishandisa. Vanhu vazhinji vanoonekwa vane rudzi rwechipiri chirwere cheshuga sevanhu vakuru, uye inowanzo kuve yakabatana nekufutisa. Vanoda kusvika makumi masere muzana evarwere vakaonekwa vaine mhando 2 chirwere cheshuga vari pamusoro pehuremu hwavo chaihwo.
Gestational chirwere cheshuga inomuka mune vakadzi vane pamuviri. Panguva yekuzvitakura mukadzi ane gestational chirwere cheshuga anofanira kudzora shuga yake yeropa. Aya mamiriro anogona kurwarisa vese amai nemwana vanorwara. Gestational chirwere cheshuga chinopera kana mwana achinge azvarwa, asi mukadzi ane njodzi huru yekubatwa nechirwere cheshuga mushure mehupenyu.
Consumer Hutano Ruzivo: Ruzivo nezve dzakasiyana mhando cheshuga.
International Chirwere cheshuga: Tsananguro yemhando dzechirwere cheshuga.
Dzidzo kubva kuYunivhesiti yeVirginia Hutano Sisitimu: Tsananguro uye huwandu hweType 1 chirwere cheshuga.
Consumer Hutano Mishumo: Tsananguro yeRudzi rwechipiri chirwere cheshuga.
Kurapa uye manejimendi
Chirwere cheshuga chinorapwa zvichienderana nekuti munhu ane mhando ipi. Chiremba anogona kuongorora chirwere cheshuga nekuyedza murwere shuga yeropa kuburikidza nekuyedzwa kwerabhoritari. Murwere anofanirwa kutora ropa rake mushure menguva yakati rebei kana vasina kudya chikafu. Izvi zvinoratidza izvo muviri weshuga yeropa nguva dzose iri pasina kukanganiswa nechikafu chakawedzerwa. Kuongororwa kwechirwere cheshuga kunoitwa nekuenzanisa akawanda akateedzana mashuga eropa uye nekufunga mararamiro emurwere uye mamiriro.
Type 1 chirwere cheshuga chinotarisirwa ne insulin inowedzera, dzimwe nguva kakawanda pazuva. Murwere anofanirwa kuongorora shuga yavo yeropa uye kutora insulini yakakwana kuti aidzora. Ivo vanofanirwa zvakare kutarisa kudya kwavo uye kudzivirira chikafu chine shuga yakawandisa, kuongorora maitiro avo ekurovedza muviri, uye kubata zvimwe zviratidzo kana zvikaitika. Insulini yevarwere vane chirwere cheshuga cheshuga inowanzo kupihwa jekiseni mumuviri. Vanhu vazhinji vanopfeka pombi diki, ingangoita saizi mbozhanhare, iyo inopinza jekiseni insulin mumuviri kana yakarongedzwa.
Rudzi rwechipiri chirwere cheshuga chinotarisirwa nenzira dzinoverengeka. Vamwe vanhu vanoda kutora insulini zvinowedzera, uye vamwe vanogona kubata avo mazinga eglucose nemuromo mishonga. Ivo vanofanirwa zvakare kutarisa kudya kwavo zvakanyatsotevedzera uye vateedzere chirongwa chekuekisesaiza. Kune munhu akafutisa ane mhando 2 chirwere cheshuga, chinangwa ndechekupedzisira kurasikirwa nehuremu hwakawandisa, izvo nguva zhinji zvinokanganisa kuwanda kwemishonga yavanofanira kutora, kana zvachose.
Kurapa kwechirwere cheshuga cheshuga kunosanganisira kutarisa mashuga eglucose kazhinji kwenguva yepamuviri. Mukadzi anofanira kunyatsoongorora kudya kwake, kugara achirovedza muviri, uye kuchengetedza huremu hwakanaka hwepamuviri.
Chirwere cheshuga Lab Miedzo: Tsananguro yemhando dzakasiyana dzechirwere cheshuga uye kuti dzinoonekwa sei.
UAB Hutano Ruzivo: Kurapa uye manejimendi cheshuga.
Rush University Health Center Chirwere cheshuga Ruzivo: Chirevo chekuchengetwa kwechirwere cheshuga.
Kurapa kwechirwere cheshuga: Tsananguro kubva kuYunivhesiti yeChicago Medical Center.
Ropa Glucose Kuongorora: Chinyorwa nezvekuti ungachengeta sei shuga yeropa.
Chirwere cheshuga uye Kurapa: Ongororo yekutarisirwa kubva kuRobert Wood Johnson University Hospital.
Chirwere cheshuga Zviratidzo
Zviratidzo zveshuga zvinogona kunetsa kujekesa. Ivo kazhinji vanobatanidzwa nezvimwe zviratidzo zvehurwere. Zviratidzo zverudzi rwekutanga chirwere cheshuga zviri kunzwa nyota, kudiwa kwekuita weti kakawanda, kuneta uye kupera simba, uye kunzwa uchingonzwa nzara asi uchirasikirwa nehuremu. Kune mwana anoonekwa aine chirwere cheshuga cherudzi rwekutanga, zvinonyanya kunetsa kuratidza zviratidzo, kunyanya kana vari pazera rakaringana kwavanotadza kutsanangura manzwiro avo. Nyora 1 chirwere cheshuga chinosanganisira zvese zviratidzo zverudzi rwekutanga, pamwe nematambudziko ekuona, chiveve kana kugwinha mumativi, uye kuva neshungu kana hutachiona hunononoka kupora. Dzimwe nguva, vanhu vane rudzi rwechipiri chirwere cheshuga havazive kuti vanacho, sezvo vasina zviratidzo zvachose. Munguva yekubata chirwere cheshuga, zviratidzo hazviwanzo kuoneka kana zvinonzi zvine zviratidzo zvekuzvitakura. Gestational chirwere cheshuga chinowanzo kuwanikwa neyakajairwa bvunzo bvunzo panguva yekuberekwa.
New York State Dhipatimendi Rehutano: Tsananguro yezviratidzo zvechirwere cheshuga.
Kubata nechirwere cheshuga: Rondedzera pamusoro pezviratidzo zvinowanzoonekwa nechirwere cheshuga.
Health Centre: Chirwere cheshuga: Tsananguro yezviratidzo zvine chekuita nechirwere ichi.
Kusimudzira Hutano Hupenyu: Ruzivo nezve zviratidzo zveshuga.
Chokwadi uye Kubatsira Kwevane Dhiyabhorosi
Vanenge vangangoita 8% yevagari vemuUnited States vane imwe mhando yechirwere cheshuga. Inobata maAfrican-America nemaHispanics zvakanyanya kupfuura chero rimwe dzinza. Ichowo chikonzero chechinomwe chinotungamira cherufu muAmerica uye chinokonzera matambudziko akakomba ekurapa kunhengo dzemuviri. Zvinogona kutungamira mukurohwa, kurasikirwa kwemaonero, kana kutenderera kwakashata kwakadai sekukonzera kudimburwa gumbo. Chiremba anofanira kunyatsogadzirisa chirwere cheshuga uye kune makiriniki akawanda munyika yose anobatsira nezvinetso zvakanangana nechirwere ichi. Munhu ane chirwere cheshuga anofanirwawo kunge aine zvekutarisa mashuga eropa rake uye nekubaiwa jekiseni re insulin kana zvichidikanwa. Midziyo iyi inowanikwa mumafamasi kana inorairwa nachiremba nachiremba.
General Chirwere cheshuga Chokwadi uye Ruzivo: Chokwadi pamusoro pechirwere cheshuga.
Chirwere cheshuga uye Kudya: Ngano uye Chokwadi: Matipi uye ruzivo nezve chikafu kune avo vane chirwere cheshuga.
Vana Hutano: Chirwere cheshuga chokwadi uye ngano.
Hutano Kutanga: Kuenzaniswa kwengano vs. chokwadi nezve chirwere cheshuga.
Nhau dzekurapa pane chirwere cheshuga
Pane kutsvagurudza kwakawanda kuri kuitika mumunda weshuga. Zvigadzirwa zvitsva zviri kupihwa zvekushandisa mumusika. Nhau dzekurapa nezvechirwere cheshuga dzinogona kuwanikwa munzvimbo zhinji dzehutano kana mumagazini ezvehutano. Izvi zvinoita kuti vanhu vazive nezve shanduko dzinogona kunge dzichitora nzvimbo muhutongi hwavo. Semuenzaniso, chigadzirwa chazvino chakagadzirwa chimiro chemalensi anoshandiswa kuongorora huwandu hweshuga yeropa. Varwere vanogona kupfeka lenzi idzi kuti vazivise nezve kwavari kana ropa ravo shuga rakwira, izvo zvisinganyanyo kuvhiringidza pane kudhonza ropa mazuva ese. Maitiro uye zviverengero zvinopihwawo sechikamu chenhau dzekurapa. Vanhu vane chirwere cheshuga vanogona kuchengetedza chirongwa chavo chehutano nekutaura nachiremba wavo uye nekuverenga nhau dzekurapa nezve mamiriro avo.
Chirwere cheshuga Nyanzvi: Kutsanangurwa kwakadzama nezvenhau uye dzidzo kune avo vane chirwere cheshuga.
Kukundwa Chirwere cheshuga: Webhusaiti ine nhau uye zvinyorwa zveavo vanorarama nechirwere.
Iyo Diabetes Research Institute: Yakagadziridzwa nhau uye kutsvagisa kwakanangana neshuga.
Iyo Diabetes Society: Nhau uye kuferefeta zvine chekuita nechirwere cheshuga.
Tsigiro uye Zvimwe Zvekushandisa
Kune nzira dzakasiyana dzekutsigira avo vanorarama nechirwere cheshuga. Vanhu vazhinji vanowana rubatsiro muboka rekutsigira mhuri uye avo vane chirwere ichi. Kune zviitiko zvinodzokororwa zvinounza mari yekumwe kutsvagisa nezvekurapa, senge zviitiko zvemitambo zvepa terevhizheni uye vanobhadhara mari. Vanhu vazhinji vanonakidzwa nekubatana nezviitwa izvi kuti vatsigire rutsigiro rwehutano hwavo. Kune zvekare zvimwe zviwanikwa zviripo pamhepo zvinopa ruzivo uye nhungamiro yekugadzirisa chirwere ichi. Chirwere cheshuga chinogona kunge chakakomba kana chikasatarisirwa, uye chirwere cheupenyu hwese. Kune vanhu vanoramba vachikurukura nachiremba wavo, vachiona hutano hwavo, uye vachiwana rutsigiro, chirwere ichi chinogona kuramba chichidzorwa.
Nzvimbo dzekudzora nekudzivirira zvirwere: Chinyorwa chekugara nechirwere cheshuga.
Kurarama Kushanda nechirwere cheshuga: Kubatana nevamwe nechirwere ichi.
Chirwere cheshuga Resource Center, Inc.: Inosanganisirwa saiti ine ruzivo pamusoro pekugadzirisa akasiyana mamiriro echirwere.
Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri ne1800wheelchair; tinopa murwere anosimudza, mobility scooters & simudza zvigaro.
Statistics kubva kuUnited States Census Bureau inoratidza kuti vanopfuura mamirioni makumi mashanu vekuAmerica vane imwe mhando ye kuremara. Sezvo ichi chiri chikamu chikuru chevanhu venyika zvakakosha kuti kodzero dze remara vanhu vanochengetedzwa. Kusarura kunopesana ne remara yakaitwa zvisiri pamutemo nezviito zvemitemo uye matekinoroji akagadziridzwa kusimudzira hupenyu hwe remara. Kune akati wandei nyika, yenyika, uye epasi rose masangano anotsigira akamiririra remara vanhu vamwe chete, kungave kwemuviri kana kwepfungwa. Pazasi pane inodzidzisa zviwanikwa gwaro kune hurema.
Resource Lists uye Madhairekitori
Dhipatimendi revashandi Zviwanikwa: muunganidzwa wezvinyorwa pa remara vanhu vari mumabasa.
Zvekuvaraidza Zviwanikwa: runyorwa rwemasayiti nezve kuremara kuwanikwa mukuvaraidza, hunyanzvi, uye zororo.
Kukwegura uye Kuremara: peji rezita rekuremara kune vakwegura.
Kuchenjerera kuremara Zviwanikwa: peji reruzivo nezvehurema hwepfungwa.
Kudzidza Kuremara Zviwanikwa: runyorwa rwemasaiti evana nevakuru vane hurema hwekudzidza.
International Center Yekuremara Zviwanikwa paInternet: yekuchenesa imba yepamhepo zviwanikwa.
Yakagadziriswa: musana kuipa kutsigirwa nevezera rako.
National kuremara Misangano
American Association Yevanhu Vakaremara: chikuru pane zvese zvakapetwa kuremara sangano muUnited States.
Iyo ARC: sangano rekuzvidira rinoshandira kugara zvakanaka kwepfungwa remara nemhuri dzavo.
Kodzero Dzedzidzo Yevakaremara uye Fund Yekuchengetedza: mutemo wezvematongerwo enyika wakatsaurirwa kuchengetedza kodzero dzevanhu ve remara MaAmerican.
Vakaremara maAmerican Veterans: masangano ekutsigira asingabatsiri e remara varwi vehondo.
Sangano reNyika pahurema: iri sangano rinoshandira kuzere uye zvakaenzana kutora chikamu kwemamiriyoni makumi mashanu nemana remara MaAmerican.
pasi rose kuremara Misangano
International Disability Alliance: inosimudzira musangano weUN mukusimudzira kwe remara pasirese.
World Institute pamusoro pehurema: sangano repasirese rezvematongerwo enyika rinoongorora kuremara nyaya pasi rose.
TASH: musangano wepasi rese wekukurudzira remara vanhu pamwe nemhuri dzavo.
Vakaremara Zvidzidzo Quarterly: yepasirese, nyanzvi yemagazini yakazvipira kutsvagiridzo nekusimudzira kwe kuremara nyaya.
Iyo Institute yeHuman Centered Dhizaini: nharaunda yepasirese inoshanda mukubvumirwa kwemaitiro epasi rese ekuenzana kutora chikamu kweiyo remara mumativi ese ehupenyu.
Glossary: rondedzero yedudziro kumazwi akakosha muhunyanzvi hwekubatsira hwemhuri dze remara.
Mari Yekubatsira Tekinoroji: bhuku rekushandisa kugadzira matekinoroji ekubatsira kutengeka.
Inobatsira Technology Technology Association: sangano rakazvipira mukugadzira akanakisa maturusi uye matekinoroji eiyo remara.
Unobatsira Tekinoroji: ruzivo kusanganisira chaiwo matekinoroji uye zviitiko zvekuvandudza hupenyu hwe remara mumwe nomumwe.
Nhungamiro kuMitemo Yekodzero Yevakaremara: dhipatimendi rezvemitemo rinotarisisa gumi dzenyika kuremara mitemo.
MaAmerican Akaremara Mutemo: kopi yemutemo wa1990 uyo wakave nechokwadi chekodzero dzevagari ve remara.
National Council pamusoro pekuremara: inzvimbo yakazvimirira yehurumende yemubatanidzwa inoshanda nemitemo nezvirongwa zvinogadzira mikana yakaenzana yeiyo remara.
ADA: Sangano reDhipatimendi Rezvemitemo, iyo ADA inoshanda panzvimbo ye remara MaAmerican.
Yakaenzana Mukana Employment Commission: iyo agency inoshanda kubvisa rusarura muvashandi zvichibva pazvinhu zvakaita sezera, dzinza, murume kana mukadzi, uye kuremara.
Hofisi yeDzidzo Yakakosha uye Rehabilitative Services: agency yeDhipatimendi reDzidzo inovandudza hupenyu hwe remara mumwe nomumwe.
Kuva Mubereki Ruzivo uye Rutsigiro
Kurera Mwana Nezvinodiwa Zvakakosha: rairo yekurera uye kunzwisisa remara vana.
Vanokosha Vanodiwa Vana: peji reruzivo rwevabereki yekukurudzira chinyorwa chezvakakosha zvido zvevana.
Kurera Vana vane Kuremara Kudzidza: matipi ekubatsira iyo dzidzo yevadzidzi vane hurema hwekudzidza.
Basa rababa: chaiwo matipi evabereki ekurera madzibaba e remara vana.
Jobho Zviwanikwa zveVanhu Vakaremara
Iyo ADA: Mabasa ako seMushandirwi: mitemo nemirau inodiwa kune vashandirwi kuti igone avo vakaremara.
Nongedzo Yevanhu Vakaremara Kutsvaga Basa: primer kune avo vakaremara kodzero dzavo munzvimbo yebasa.
Kuzvimiririra Kwehupfumi kuburikidza neMabasa & Kuzvishandira: yepamutemo hurumende gwara rekuwana nekuchengetedza basa.
Kutsvaga basa kwakakukodzera: chinyorwa chinotsanangura mhando yemabasa vanhu vakaremara vanofanirwa kutsvaga.
USA Jobs: gwaro rechokwadi rekutsvaga basa mukati mehurumende yemubatanidzwa.
Kugona Mabasa: kunyora basa uye kutangazve rubatsiro kune vanhu vakaremara.
Project Hired: sangano rakazvipira kubatsira vanhu vakaremara kuwana nekuchengetedza mabasa.
Federal Mabasa: kunyorwa kwemabasa ehurumende nehurumende kunyanya kune avo vakaremara.
WorkWORLD: software yakagadzirirwa kubata hunyanzvi neFederal neSocial Security muripo.
Zvekuita-Zvakanangana Zviwanikwa zveVadzidzi Vane Urema: kunyorwa kwemasangano anobatsira nenheyo.
Mano Ekubatanidza: zviwanikwa zvine chekuita nebasa revashandi nevashandirwi.
Vocational Kugadziridza: zvekuvaka rehab zviwanikwa zvakanyanya kune vanhu vakaremara.
Basa rePurojekiti: inopa rubatsiro neruzivo kune avo vane hurema hwepfungwa.
Kubatira Vanhu Vakaremara: zviwanikwa zvekutsvaga mabasa uye kugadzirisa kwehunyanzvi.
Simudza Inc.: Sangano rinotarisira kuunganidza uye kudzidzisa vanhu vakaremara manejimendi manejimendi uye ehunyanzvi tekinoroji nzvimbo.
National Bhizinesi uye Akaremara Kanzuru: boka rebhizimusi rinotarisa kuhaya vanhu vakaremara.
Rubatsiro rweMutemo & Nongedzo Yekuwanika
ADA Kutevedzera Mutemo wakaputswa kuita mazita akati wandei anosanganisira:
ADA Mutemo weChinyorwa II
ADA Mutemo weChitatu III
Rehabilitation Act ya1973: chiito chakapasiswa chinorambidza kusarura kunobva pa kuremara.
Chikamu 508: chikamu cheRehabilitation Act icho chinoedza kuona kuti ruzivo rwunowanikwa nyore kuvanhu vese.
Kuremara / Mutemo wakaremara uye Nyaya Dzepamutemo: kuunganidzwa kwezve zviwanikwa zvine chekuita nebasa uye kuremara mutemo.
Nzvimbo dzekuzvimiririra Kurarama: yose, yekutsvaga inonyorwa yeCILs kune vanhu vakaremara
Yakaenzana Employment Mukana Commission: anomanikidza mumiriri weChinyorwa I cheADA.
Kuremara.gov: yepamutemo hurumende portal kune vanhu vakaremara.
Zviwanikwa zvevakaremara: basa, basa, uye mararamiro ruzivo.
Dhipatimendi revashandi Vakaremara Zviwanikwa: inopa ma link emabasa uye dhairekitori ye kuremara kutaurirana munyika yose.
Kubatsira Kwevanhu Vakaremara: ruzivo pamusoro zvinobatsira, inishuwarenzi, uye Social Security.
Disability Statistics: nhamba uye ruzivo nezvevanhu vakaremara muUnited States.
Vakaremara maAmerican Veterans: zvinobatsira uye zviwanikwa zve remara veterans.
Kubatsira Kune Vashandisi veWiricheya: VeDzimba nevekunze
Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri ne1800wheelchair - Iyo Chitoro cheWiricheya.
Mawiricheya chinja hupenyu. Mawiricheya sunungura iyo remara kutenderera pasirese, zvichibvumira kuzvimiririra uye zvirinani unhu yehupenyu. Mawiricheya hapachina chiratidzo "hachikwanise" asi "chogona." Uye hakuna hurema.
Asi kune kuoma. Zvimwe zvivakwa hazvisi hwiricheya kufambidzana, havana ramp, hapana otomatiki madhoo. Vasingafungi vatengi vachiri kupaka mukati vakaremara kupaka nzvimbo. Kushaikwa kwe kufamba zvinoita kuti zviome kuchengetedza tarisiro yakanaka pamazuva ekudzoka kweanenge achangoburwa remara. Kune avo vagara vari mu hwiricheya, hazviwanzo kuve yekuwedzera kuwedzerwa kwega.
Zvichienderana padanho rekuoma mitezo, kudimurwa, kana kurwara senge tsandanyama dystrophy, iyo vakaremara munhu anogona kuzvisimudzira mukati nekubuda mune zvavo hwiricheya voga, vanogeza, vanogadzirira mhuri kudya kwemanheru, kutyaira mota, kuenda kunotenga.
Iwo maAmerican Ane Urema Mutemo unopa Bhiri rekodzero dzeiyo remara kana "zvakasiyana-siyana" sezvinoita vamwe vanopokana. Zvikoro zvinofanirwa kugadzirisa zvinodikanwa. Zvivakwa zvehurumende zvinofanirwa kuve kufambidzana. Mutemo unochengetedza maAmerican, asi hapana Mutemo wakadaro unodzivirira vanopfuura mamirioni zana vakaremara munyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu pasi rose. Imwe nhamba inoshamisa: 150 muzana yevagari veAngola iri remara. Kuurayiwa kwezvimbambaira munyika dzakaita seAfghanistan, Cambodia, Bosnia neMozambique dzakakwirira zvakanyanya uye vazhinji veavo vakaremadzwa nezvimbambaira havana Mawiricheya.
Masangano akaita se hwiricheya Nheyo dzinoshanda nemasangano muUnited States nepasirese kupa yakaderera mutengo Mawiricheya kune avo vanoda rubatsiro. Kune avo vari munyika dzichiri kusimukira dzine yakaoma nzvimbo, iyo Mawiricheya zvakavakirwa kumira zvinorema, zvisina kunaka kushandiswa uye mutengo unosvika madhora zana nemakumi mashanu ekugadzira. Iyo mitengo mune dzimwe dzenyika dzisiri dzekuMadokero yezvinhu zvekutengesa zvakagadzirwa Mawiricheya vakafemerwa kudarika $ 1700, zvichiita kuti vasasvikike kune vese kunze kwevapfumi. Zviri kuomera kuwana vanhu ava iyo Mawiricheya ivo vanoda nekuda kwehurumende uye tsika redhiipi, uye dzimwe nguva, huori. Musika mutema we Mawiricheya haina kukwirira, asi kubiridzira kunogona kuva dambudziko.
US uye International hwiricheya Masangano eRuyamuro
International Wheelchair Foundation Inopa Mawiricheya yenyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu pasi rose.
Inobatsira Technology Sangano Links Kubva kuAle-Data, zvinongedzo zvinopa ruzivo kumasayiti anopa matekinoroji ekubatsira uye zvimwe zvekushandisa zvekurapa.
Dhipatimendi rezvemitemo ADA Links
Kodzero Dzevakaremara Mutemo Mvumo yeFederal inopa isina-rusarura ruzivo nezvekodzero dzekutanga dze vakaremara vanhu maererano nebasa, hurumende, zvekutengesa, uye pekugara paruzhinji nekuwana, kutakura, uye kufonera.
ADA technical Rubatsiro Inobatanidza kune ehunyanzvi zvinhu zvine chekuita nehurema. Rakawandisa runyorwa rwezvinyorwa zveveruzhinji.
Guta Diki ADA Mitemo Madhorobha madiki nemaguta kazhinji haana mabhajeti ekugadzira ramp uye dzimwe nzvimbo dzekugara remara. Urwu ndirwo runyorwa rwemitemo iyo ivo vakasungwa neayo mashoma.
Guta Hurumende ADA Matambudziko Matambudziko ebhajeti uye ekuvaka, red tape uye matambudziko ekomiti anogona kupa zvipingaidzo pakuwanika.
Kodzero dzeVanhu Mibvunzo-ADA Dzidza nezvekodzero dzako dzevanhu se vakaremara munhu muUnited States.
Iyo Christopher naDana Reeve Foundation
Reeve Paralysis Mutemo 2009 Yakaunzwa mu2007 kune bipartisan kutsigira, CDRPA inosimudzira kutsvakirirana, kutsvagisa kwekutsvaga kwekuchengetedza, uye kugadzirisa unhu yehupenyu kune avo vane kufamba kukanganiswa. Yakasainwa neMutungamiri Barack Obama Kurume 20, 2009 seChinyorwa XIV cheOmnibus Public Lands Bill.
Kana iwe ukaona ichi chinyorwa chichibatsira, ndapota sununguka unzwe kuti ubatanidze kana kuishandisa zvakare. Credits yakapihwa www.1800wheelchair.com